လမင်းခင်: ကလျာဏနွယ်ဝင် ဗုဒ္ဓဘာသာ သူတော်စဉ်အပေါင်းတို့ (ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ )
ကလျာဏနွယ်ဝင် ဗုဒ္ဓဘာသာ သူတော်စဉ်အပေါင်းတို့ (ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ )
ကလျာဏနွယ်ဝင် ဗုဒ္ဓဘာသာ သူတော်စဉ်အပေါင်းတို့ ခင်ဗျား -
ယခုအခါ ဗုဒ္ဓဘာသာအများစု မှီတင်းနေထိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံမှာ အာဏာရူး မိစ္ဆာစစ်ဘီလူးတို့သည် တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး ဘာသာ သာသနာကို ဖျက်ဆီးနေကြသည်ကို အားလုံးသိနေ မြင်နေကြပြီးဖြစ်သည်။
ရှေ့ဆက်၍လည်း မြန်မာ့မြေပေါ်မှာ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုး ဘာသာ သာသနာကို ချစ်ခင်မြတ်နိုး အလေးထား ကိုးကွယ်သူတို့ကို အမြစ်ပြတ်သုတ်သင်၍ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုး ဘာသာ သာသနာ လုံးဝကွယ်ပျောက်အောင် အစီစဉ်ချ လုပ်ဆောင်နေကြပါသည်။
နအဖ ဗာလ လက်နက်အားကိုးဖြင့် မတရားလုယူထားသော အဓမ္မအာဏာအရသာကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အဆပေါင်းများစွာ ယစ်မူး ရူးသွပ်နေကြသော မိစ္ဆာစစ်ဘီလူးတို့သည် အစီအစဉ်တကျ ကြံ့ဖွတ် စွမ်းအားရှင် မီးသတ် ရဲ လုံထိန်း စရဖ သတင်းပေး စစ်ခွေးများဖြင့် အဆင့်ဆင့် အကွက်ချကာ … တောင်ပေါ် မြေပြန့်မကျန် တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုအားလုံးကို စည်းလုံးညီညွတ်အောင် ကြိုးပမ်းနိုင်စွမ်းရှိပြီး စစ်ကျွန်ဘ၀မှ တိုင်းပြည်လွတ် လပ်ရေးရအောင် ခေါင်းဆောင်နိုင်သော လွတ်လပ်ရေးဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီး နိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လုပ်ကြံ၍ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို စစ်ကျွန်အဖြစ်သွပ်သွင်းကာ ဘာသာသာသနာကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းတိုက်ခိုက်ရန် လုပ်ဆောင်နေကြပါသည်။
ကလျာဏနွယ်ဝင် ဗုဒ္ဓဘာသာ သူတော်စဉ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျား -
ယင်းကဲ့သို့ ဘုရားအဆုံးအမ တရားတော် (ဗုဒ္ဓသာသနာ၊ဗုဒ္ဓဓမ္မ) တို့ကို ယုတ်မာကောက်ကျစ်စွာ အစီအစဉ်ချ ဖျက်ဆီးနေသည်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ဘယ်သူဘာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရမှာ၊ ကိုယ်ပြောရင် ကိုယ်ခံရမှာ၊ ကိုယ့်ဖာသာ အေးအေး တိတ်တိတ်နေတာပဲ ကောင်းတယ်ဆိုပြီး ဒီအတိုင်း ကြည့်နေကြပါက (၀ိနည်းပိဋကတ် ကမ္မက္ခန္ဓကတို့၌ လာသော ယဿ နက္ခမတိ သော ဘာသေယျ = မကျေနပ်ပါက ပြောကြပါ၊ (နှုတ်ဖြင့် မပြောနိုင်လျှင် ကိုယ်ဖြင့်ဖြစ်စေ မကျေနပ်ကြောင်း သိစေနိုင်သည့် တနည်းနည်းဖြင့် ထုတ်ဖော်ရမည်) တသ္မာ တုဏှီ ဧ၀မေတံ ဓာရယာမိ = သင်တို့ တိတ်တိတ်နေနေကြတဲ့အတွက် သင်တို့ သဘောတူတယ်လို့ မှတ်လိုက်မယ်။ ) ဟူသော ဘုရားဟောအတိုင်း အလိုတူအလိုပါ စစ်မိစ္ဆာများ ဖြစ်သွားကြပါမည်။
ဗြဟ္မဏတိဿမိစ္ဆာသူပုန်တို့ရန်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာ မပျောက်ပျက်အောင် မိမိတို့စွမ်းနိုင်သည့်နည်းတို့ဖြင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့သော သီဟိုဠ်(သီရိလင်္ကာ) သံဃာတော်များ၊ မိစ္ဆာစစ်သွေးကြွ ကျေးကုလားတို့ရန်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာ မပျောက်ပျက်အောင် တွန်းလှန်တိုက်ခိုက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့သော သီဟိုဠ်(သီရိလင်္ကာ) ဒုဋ္ဌဂါမဏိမင်း၊ အနော်ရထာဘုရင်၊ ကျန်စစ်သားမင်းတို့နှင့် တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် အသက်ပေးလှူသွားခဲ့ကြသော လွတ်လပ်ရေးဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ ကျေးဇူးကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်ခွင့်ရနေ ကြသော ဗမာနိုင်ငံသားတိုင်းသည် အာဏာရူး စစ်ဘီလူး စစ်မိစ္ဆာများက ဗုဒ္ဓအဆုံးအမ (ဗုဒ္ဓသာသနာ) ကို ဖျက်ဆီးနေကြသည်ကို ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလိုနေရင်း ဒီအတိုင်းကြည့်ကာ ဒို့ခေတ်ရောက်မှ ဘာသာ၊ သာသနာ နဲ့ လူမျိုးပါ အပျောက်ခံကြတော့မည်လော?
သားစဉ်မြေးဆက်အတွက်လည်း မျက်မှောက်မှာ စစ်ကျွန်ဘ၀ရောက်ကာ သံသရာမှာ အ၀ီစိရောက်မည့် ဆိုးမွေနှစ်များ ချန်ရစ်ထားကြတော့မည်လော?
စစ်မိစ္ဆာရန်ကို တွန်းလှန်တိုက်ဖျက်၍ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုး ဘာသာ သာသနာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြမည်လော?
ကိုယ်တိုင် စဉ်းစားကြပါ၊ စဉ်းစားပြီး ဆုံးဖြတ်ကြပါ။
အညံ့ခံပြီး ဆိုးမွေချန်မယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီလို အန္ဓ ဗာလတို့အတွက် သူ့တွင်း သူဖောက် အ၀ီစိရောက်မှာမို့ ပြောစရာစကား မရှိတော့ပါ။
တွန်းလှန်တိုက်ဖျက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင် ပါရမီမြောက်သည့် ကုသိုလ်အောင်ပွဲဆင်နွဲနိုင်သည်ထိ တိုက်ပွဲဝင်ကြရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
တိုက်ပွဲဝင်ကြရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော် ဖိတ်ခေါ်ခြင်းသည်
၂။ သက်ရှိသတ္တ၀ါဟု အမှတ်ရှိခြင်း၊
၄။ သတ်ရန် ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း၊
၅။ ထို့ကြောင့် သေခြင်းဟူသော အင်္ဂါငါးပါးနှင့် ပြည်စုံပါက ကံမြောက်သော ပါဏာတိပါတကံ ကျူးလွန်ရန် မဟုတ်။ သောတာပန်အရိယာဖြစ်သော ဘုရင်ဗိမ္ဗိသာရ၏ စစ်သည်တော်များနှင့် ဒုဋ္ဌဂါမဏိမင်းကြီးတို့ကဲ့သို့ ဘာသာတရားနှင့် ဘုရားသာသနာတော်၏ အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ရေးနဲ့ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစစ်ရန်ကို တော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်ဖြင့် တိုက်ပွဲဝင်ရန် ဖြစ်သည်။
ယခု အသင်တို့ ကိုးကွယ်နေကြသော ဗုဒ္ဓသာသနာကို တည်ထောင်ခဲ့သူ ရဟန်းဂေါတမသည် ဘ၀ပေါင်းများစွာ အကျင့်ပေါင်းများစွာကို ဖြည့်ကျင့်ပြီးမှ ဗုဒ္ဓ (ဘုရား) အဖြစ် ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာ ထိုဗုဒ္ဓသာသနာ မကွယ်ပျောက်ရေးအတွက် ကိုယ့်အသက်ကို စွန့်လွှတ်လှူဒါန်းခြင်းဟူသော ဒါနဥပပါရမီဖြည့်ဆည်းပြီး ကြိုးစားကြရန် အထူး လိုအပ်နေပါပြီ။
စရိယာပိဋကတ် အကိတ္တိဝဂ် သသပဏ္ဍိတစရိယ တွင် ဘုရားလောင်း ယုန်မင်းသည် ဆာလောင်မွတ်သိတ်နေသော ပုဏ္ဏားတယောက်အတွက် မိမိရဲ့ ကိုယ် အသက်ကို မငဲ့ကွက်ပဲ မီးပုံထဲ ခုန်ဆင်းကာ ဒါနဥပပါရမီ ဖြည့်ခဲ့ပါသည်။
ဆာလောင်မွတ်သိတ်နေသော သန်းပေါင်းများစွာသော ပြည်သူတို့အတွက်နဲ့ ဇီဝိတပရစ္စာဂ (အသက်စွန့်မှု) ဒါနဥပပါရမီ ဖြည့်တော်မူခဲ့သည့် ဘုရားသာသနာတော် စစ်မိစ္ဆာရန်မှ မကွယ်ပျောက်ရေးအတွက် -
ကလျာဏနွယ်ဝင် ဗုဒ္ဓဘာသာ သူတော်စဉ်အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါသောကြောင့် -
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာအတွက်မို့ ငါပါ အသက်ဆုံးစေမည်၊
နောက်မဆုတ်ပေါင် ခုလိုတွေးလို့ ကုသိုလ်ရေးမို့ ကြိုးစားမည်၊
ဒို့လဲ ကြိုးစားမည် ဟု အဓိဋ္ဌာန်ပြုကာ တိုက်ပွဲဝင်ကြပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော် လက်တွဲခေါ်အပ်ပါသည်။
မြန်မာ့ဗုဒ္ဓသာသနာ ကာကွယ်ရေး စစ်သည်တော် (ပြည်တွင်းမှ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ သံဃာတော်တစ်ပါး) ။
Messages in this topic (1) Reply (via web post) | Startane
မေး(လ်) ပေးပို့ လာသူအား အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည် ။